Dagaalkii u dhexeeyey Real Madrid iyo maamulka
Guushii Real Madrid ee martida ahayd ee ay ka gaadhay Osasuna ayaa u aragtay kooxda heysata horyaalnimada inay siibatay oo ay dib ugu dhacday hogaanka horyaalka iyadoo seddex kulan ay ka harsan tahay.
Sunshine ayaa shaaca ka qaaday Bruno
Tababare Zinedine Zidane ayaa carooday kulanka kadib si la mid ah goolhaye Thibaut Courtos.
Waa cutubkii ugu dambeeyay ee dagaalka udhaxeeya Real Madrid iyo maamulada La Liga, laga bilaabo xuquuqda telefishinka, Super League, VAR ilaa ciyaartii xalay ee Pamplona.
“Ma aheyn ciyaar kubada cagta ah,” Zidane ayaa yiri ciyaarta ka dib. Waxay ahayd in la kala gooyo.
“Ma garanayno haatan xitaa haddii aan awoodno inaan ku laabano Madrid.”
Courtous ayaa ku soo biiray mudaaharaadka isaga iyo tababarihiisa wuxuuna yidhi: “Waa ayaan darro waxa ay nagu sameeyeen masuuliyiinta La Liga, ma nihin dad iska cayaaro ah.
“Waxaan ku duulay garoon baraf ah maxaa yeelay hadaanan duulin waxaan lumin lahayn seddex dhibcood.
Waxaan nahay dad mana nihin riwaayad.
Real Madrid ayaa ka carootay ka hor ciyaartii shalay. Waxay doonayeen inay safraan Sabtidii laakiin ma aysan dooneynin inay safraan Jimcaha, halka La Liga ay diiday inay dib u dhigto ciyaarta markii duufaanta Filomena ay sii xoogeysatay. Laakiin way safreen oo waxay ku ciyaareen garoon aan xaaladdiisu fiicnayn, waxay lumiyeen dhibic kale waxayna ku dhammaadeen ka dib Atletico Madrid.
Dagaalka u dhexeeya Real Madrid iyo La Liga ayaa sii xoogeystay toddobaadyadii la soo dhaafay. Madaxweyne Florentino Perez ayaa ku hanjabay inuu samaynayo European Super League si kooxdiisu ugu qasabto inay ka baxdo La Liga, halka madaxweynaha La Liga Javier Tebas uu dhaleeceeyay Perez.
Real Madrid ayaa sidoo kale ka xanaaqsan in go’aamada VAR ay inta badan iyaga ka soo horjeedaan. Los Blancos ayaa ku doodeysa in qaladaadkii muranka dhaliyay ee ka caawiyay iyaga inaan lagu soo celin telefishanka.
“Waxaa jira waqtiyo badan oo aysan soo bandhigin qaladaad muhiim ah,” ayuu yiri madaxweynaha Real Madrid.
“Qof walba wuu arki karaa qaladka hadii lagu celiyo, laakiin marnaba ma dhici doono.”
Madaxweynaha La Liga Tebas ayaa u jawaabay Perez: “Hadaad sidaas u maleyneyso, Kontroolkaaga TV-ga wuxuu leeyahay badhan kuu ogolaanaya inaad dib u soo hesho waxyaabihii hore.”
Xiriirkii burburay ee u dhaxeeyay Real Madrid iyo La Liga ayaa gaaray heer aan soo laaban.
shouting after the release of two inmates from
Garsoore Michael Oliver wuxuu qirayaa qaladaadka halista ah